Igumbi elicocekileyo le-2 kwiSixeko sase-Iloilo kunye ne-WIFI - I-Airbnb
Igumbi elicocekileyo le-2 kwiSixeko sase-Iloilo kunye ne-WIFI
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguRichie Joy
URichie Joy yi-Superhost
I-Philippa's B&B Pension House inamagumbi ali-11 okuhlala eBrgy Burgos Mabini Plaza Lapaz, kwiSixeko sase-Iloilo. Siyimizuzu emi-3 yokuhamba umgama ukusuka eLapaz Plaza, imizuzu emi-5 ukuhamba ukuya kwiMarike yoLuntu yaseLapaz, iJollibee kunye negrosari / ikhemesti egama linguMerryMart; kunye nokuhamba ngomzuzu we-10 ukuya eGaisano Iloilo City. Simi kumbindi kwiSixeko sase-Iloilo kwaye sijikeleze imizuzu engama-30 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, sifikeleleka ngemoto, iteksi okanye iveni.
Umgangatho osezantsi wesakhiwo uhlala kwindawo yethu yokungena, isidlo sakusasa kunye nendawo yeWiFi
Kukho indawo yokutyela kunye nelobby eyindawo yeWiFi yasimahla yeendwendwe. Kukwakho nendawo yokufunda okanye indawo yokusebenza, kunye netafile nezitulo zokutya okanye ukusebenza kuwo wonke umgangatho. Kukho indawo yokupaka yasimahla yeendwendwe.
4.86 · Izimvo eziyi-73
Sibekwe kwindawo ephakathi malunga nemizuzu emi-2 ukuhamba ukuya eLapaz Plaza, imizuzu emi-5 ukuhamba ukuya kwiMarike yaseLapaz, iJollibee, iMerry Mart Grocery kunye neKhemesti, kunye ne-10 imizuzu yokuhamba ukuya eGaisano Lapaz Iloilo City.
Umbuki zindwendwe ngu- Richie Joy
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Iloilo City